December 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Android Version 2. . .များအတွက်မြန်မာကီးဘုတ်နှင့် Font Installer.exe
Ye Naing at 4:13:00 PM 1
ဒီ Post လေးကတော့ ကျွန်တော့လိုလက်သင်တပည့်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်...ဆရာများအတွက်
မရည်ရွယ်ပါခင်ဗျား.....။ Version2နှင့်အထက်ဖုန်းတွေ ကိုင်ဆောင်ထားကြတာများသားခင်ဗျ......။
ဒီ exe လေးထဲမှာတော့ Keyboard သွင်းရန် 1 & Enter.../ Font changer install လုပ်ရန်2& Enter..../ Recovery Mode ၀င်ရန်3& Enter..../ထွက်ရန်...4 & Enter...ပါခင်ဗျာ။ ရိုးရာမပျက်အောင် Unknown
Source နှင့် USB debugging တော့ On ထားပေးပါ...။ Root ရန်အတွက် Latest V-Root Version 1.7.4 လိုအပ်ရင်တော့ Click Here ဒီနေရာလေးမှာနှိပ်ပါ...။ ကျွန်တော်ယူသုံးထားသော App များရဲ့မူရင်း
Developer များကို Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျ။
*** Special thanks to Ko ThuDaNu AIO & Maung Pauk ***
www.maungpauk.org ပါခင်ဗျာ.. (မောင်ပေါက်ရဲ့ ဘလော့ကို မသိဘူးဆိုလို့ )
Maung Pauk at 8:00:00 AM 12
ကျွန်တော်မောင်ပေါက် နည်းပညာ ဆရာကြီးတစ်ဦးမဟုတ်ပေမယ့် ဖတ်သမျ မှတ်သမျ လေ့လာသမျတွေကို ဘလော့တစ်ခုလုပ်ပြီး ငွေကုန်၊ အချိန်ကုန်၊ ပင်ပန်းခံ လုပ်လာခဲ့တာ ၂ နှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပါပြီ.. မောင်ပေါက်ကို လူသိလည်း တော်တော်များနေပါပြီ.. ဒါ ဆရာလုပ်လို့ လူသိများတာမဟုတ်.. ကျွန်တော့်ဆီမှာ စာဖတ်သူတွေလိုချင်တွေ တော်တော်များများ ရနိုင်လို့ပါ.. ပြီးတော့ ဖုန်းနံပတ်တွေ ရကြတယ်.. တကယ်တော့ ဖုန်းနံပတ်ပေးထားတာဟာ တစ်ဦးချင်း မေးမြန်းတာကို ဖြေကြားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သိသလောက် တတ်သလောက် ဖြေခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော့် ဖုန်းကိုရော၊ အီးမေးကိုရော မေးသမျ မေးခွန်း အားလုံးနီးပါးကို ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်.. သိတာလည်း ပါသလို မသိတာတွေလည်း အများကြီးပေါ့ခင်ဗျာ.. အဲဒီထဲမှာ အဆိုးဆုံးက ကျွန်တော့် ဘလော့ကို မသိကြဘူးတဲ့.. မောင်ပေါက်ကို သိတယ်. မောင်ပေါက်ရဲ့ ဘလော့ကို မသိကြဘူးတဲ့.. ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလိုက်တာ.. ဖုန်းနဲ့မေးတယ်. ကျွန်တော့ဘလော့မှာ တင်ထားပြီးသားပါ၊ အီးမေးနဲ့ မေးတယ် ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ရှိပါတယ်. ယူလိုက်ပါ ဆိုတော့ မောင်ပေါက်ရဲ့ ဘလော့ကို မသိလို့ပါတဲ့..
ကဲ. ရှိစေတော့ မသိတာကို သိအောင်လုပ်ရတာပ..
ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော့်ရဲ့ အမှတ်အသား Logo ဟာ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းထားတဲ့ ပုံပါ..
တကယ်ဆိုမိတ်ဆွေရယ်. google မှာ မောင်ပေါက် လို့ပဲရှာရှာ၊ Maung Pauk လို့ပဲ ရှာရှာ ထိပ်ဆုံးမှာ ကျွန်တော့်ဘလော့ကို မြင်နိုင်ပါတယ်..
VRoot 1.7.4.4898 ( Root Tool ထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံး VRoot_1.7.4.4898 Updated ထွက်ပြီ.. )
Maung Pauk at 2:08:00 AM 1
Root Tool ထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံး VRoot ကတော့ ဗားရှင်း 1.7.4.4898 သစ်ထွက်လာပါပြီ.. ဒီဇင်ဘာ 24 ရက်နေ့ကထွက်တဲ့ ဗားရှင်းသစ်မှာ Root Permission Feature အသစ်တွေထပ်ထည့်ပေးထားပြီး အရင်က Root လို့ရတဲ့ Phone အမျိုးအစားတွေအပြင် Lenovo K900, K860 တွေကိုပါ Root လို့ရအောင် ထပ်မံပြီး ပေါင်းထည့်ပေးထားပါတယ်..
1 model library updated to 2013.12.24 Day
2 adds support for Intel X86 platform Root support (such as Lenovo K900, K860)
3. multiple optimized for the previous version of the N
Maung Pauk at 1:39:00 AM 3
(၁)နိယာမ ဗဟိုပြု ခေါင်းဆောင်မှု (ခင်မောင်ညို)
(၃)ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး မိတ်ဆက် (ခင်မောင်ညို)
(၅)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စီးပွားရေးအမြင်(တင်စိုး -ဘောဂဂုဏ်)
(၇)ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ် အိုင်ဒီယာစီးပွားရေး (မောင်စူးစမ်း)
(၁၃)အလုပ်အင်တာဗျူးလုပ်သူ နှစ်သက်သဘောကျစေမည့် အချက်များ
(၁၄)ဥာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် မေးခွန်း အမှတ် (၂၈)မှ(၃၃)
Credit to : Free Download Myanmar Ebook
Riff Box အကြောင်း - Ebook
Maung Pauk at 1:20:00 AM 0
Riff Box အကြောင်းကိုပြည့်စုံစွာ လေ့လာ လိုသူများအတွက် စာအုပ်လေးတစ်အုပ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Riff Box နဲ့ ပြုပြင်လို့ရတဲ့ အမျိုးအစားတွေကအစ၊ Ruff Box အတွက် လိုအပ်တဲ့ Software များ သွင်းခြင်း၊ Riff Box ကို Device နဲ့ ချိတ်ဆက်ခြင်း တွေအပြင် ဘယ်လို ပြုပြင်ရမလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ ရှင်းပြထားတဲ့စာအုပ်ပါ.. Hardware Service သမားတွေ၊ Software Service သမားတွေ လေ့လာသင့်ပါတယ်..
Credit : ကိုဇော်သွင်(နည်းပညာ)
Maung Pauk at 5:36:00 PM 0
Huawei Ascend G610 Official Firmwares တွေကို ရနိုင်သလောက်စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Huawei Ascend G610 မှာ U-00, U-20, C-00, T-00 နဲ့ T11 ဆိုပြီး အမျိုးအစား (5) မျိုးတွေ့ရပါတယ်.. အမျိုးအစား တစ်ခုစီအလိုက် သေသေချာချာကြည့်ပြီး ယူကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်.. မှားတတ်လို့ပါ.. အောက်ပါ အမျိုးစားတွေကို တင်ပေးထားပါတယ်..
Huawei Ascend G610-T00
Huawei Ascend G610-T11
အခြား Build Number တွေ ရှိနေသေးပေမယ့် တင်ထားတဲ့လင့်တွေ သေနေပါတယ်. ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးဖို့ကလည်း မြန်မာ့ အင်တာနက် အခြေအနေအရ တင်လို့မရတာကြောင့် နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်..
Zemana AntiLogger 1.9.3.514 Full + Keygen ( for PC )
Myanmar IT Sky at 9:19:00 AM 0
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကတော့ Virus ကိုရှင်းပေးတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ..
spyware, Rootkits, Trojans, Viruses, Bots အစရှိတဲ့ပိုးတွေ
အပြင်အခြား virus တွေကိုလဲရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျာ.
တယ်ခင်ဗျာ. Full version ဖြစ်အောင် Keygen လေးပါထည့်
Zemana AntiLogger 1.9.3.514 Full + Keygen - Provides effective anti-malware protection, working with all major security products. AntiLogger significantly improves your security, providing protection against the latest spyware, Rootkits, Trojans, Viruses, Bots, Adware and assemblers passwords - known as Malware. Installs in seconds, works fast and does not hinder you in the future. Zemana AntiLogger 1.9.3.514 Full + Keygen - You can visit any sites, knowing that it is now your computer and the information on it are protected.
Features of Zemana AntiLogger 1.9.3.514 Full + Keygen:
Untether Jailbreak coming out for 6.1.3!
aung koe at 1:01:00 AM 2
How to Make Untether Jailbreak for 6.1.3/6.1.5 iDevices
1. A tethered jalbroken iPhone 3GS, iPhone4running iOS 6.1.3 or and iPod Touch 4G running iOS 6.1.5 either using Sn0wbreeze or Redsn0w
2. Go to Cydia > Changes > Refresh and wait for Cydia to reload the refreshed data
3. Then search for “p0sixspwn” and install it.
That’s it! You’re untethered jilbroken on iOS 6.1.3/6.1.5.
Currently p0sixspwn supports only iPhone 3GS, iPhone4and iPod Touch 4G on iOS 6.1.3 and iOS 6.1.4. If you don’t feel like upgrading your A5+ device to iOS 7, sit tight forabit because an A5+ jailbreak for 6.1.3/6.1.4 will be out inacouple of days. If your device is already running iOS7– iOS 7.0.4, use evasi0n7 to jailbreak your device:
Android Lesson Knowledge
Apk ဖိုင်များကို မိမိကြိုက်ရာ အိုင်ကွန်ပုံချိန်းနည်း
Ye Naing at 5:24:00 PM 1
Credit to - Djjoe Man ( MMF )
Apk ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်လိုက်ပါ
7zip >>> Open archive >>> res >>> drawable-xhdpi ဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲက icon ဆိုပြီးထိပ်စီးနာမည်နဲ့ ထိုဆော့ဝဲရဲ့အိုင်ကွန်ပုံကိုတွေ့ပါမယ် ။
ထိုပုံ၏နာမည်တိုင်း မိမိထည့်လိုသောပုံကို နာမည်ပေးပြီး ထိုဖိုဒါထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါ ။ ပြီးပါပြီ :)
မိမိထည့်သောပုံမှာ ( PNG ဖော်မက်ဖြစ်ရမယ် 96x ပတ်လည်ဆိုဒ်ဖြစ်ရပါမယ် )
ထည့်ပြီးရင် ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ ထို Apk ကိုဖုန်းထဲထည့်လိုက်ပါ ။
ထို Apk ကို အင်စတောလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး ပျက်စီးသွားပါပြီ ။
Apk ကို Apk ပြန်ပြောင်းပေးတဲ့ဆော့ဝဲနဲ့ Apk ပြန်ချိန်းရပါမယ် ။
Play Store မှာ ZipSigner ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲကို ဒေါင်းပြီးလုပ်လိုက်ပါ ဖရီးပေးထားပါတယ် ။
ထိုဆော့ဝဲဟာ Apk ကို Apk ပြန်ချိန်းပေးတဲ့ဆော့ဝဲပါ :)
ကွန်ပြူတာမှာမိမိလုပ်ပြီးတဲ့ Apk ကို ဖုန်းထဲထည့်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် ZipSigner ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လိုက်ပါ Choose in/Out.. ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး မိမိပြင်ထားတဲ့ Apk ကိုသွားရွေးပေးလိုက်ပြီး Sign The File ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ။
မျဉ်းတန်းသွားနေပါမယ် ပြည့်သွားရင် My File ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်ပါ Apk အသစ်တစ်ခုရောက်နေပါပြီ ။
မှတ်ချက် ။ ။ မိမိပြင်ထားပြီးတဲ့ Apk ကို ZipSigner ထဲထည့်ချိန်းမှ Apk ပြန်ထွက်ပါမယ် ။
ဘာမှပြုပြင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ Apk အသစ်ကို ZipSigner ထဲသွားထည့်ချိန်းရင် Zip နဲ့ပဲ ထွက်လာပါမယ်...။
မားကပ်ဝင်ဖို့ရန် အဆင်မပြေသူများ ZipSigner Apk ဆော့ဝဲကို အောက်ကကြိုက်ရာလင့်မှာဒေါင်းယူပါ ။
Download Zipsinger from Mediafire
Download Zipsinger from Zippyshare
Download 7zip for Window
Myanmar IT Helper at 1:20:00 AM 1
Apple IT Knowledge
phone ကို မော်ဒယ် အလွယ်တကူ ခွဲခြား သိရှိ နိုင်မယ့် နည်းလေး ပါ
Maung Pauk at 8:18:00 PM 0
Iphone တွေ ကို 3G , 3GS , 4G , 4Gs ,5,5S တွေ ipad တွေဟာ ပုံစံ ဆင်သဖြင့် အများ စု မှာ အလွယ်တကူ ခွဲ ခြား မသိနိုင်တာ တွေ ရှိပါတယ် ။ အဲ့ အတွက် ဒီ Post ကို ရေးလိုက်တာပါ ။အပြင် ကာဗာ မှာ မော်ဒယ် ရေးထားပေ မယ့် အလွယ်တကူ မသိနိုင်ပါဘူး ။ အဲ့ အတွက် ပုံ မှာ ရေးသားထား တဲ့ Model နဲ့ တွဲ သိနိုင်အောင်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ။ထို့ အပြင် Firmware ဒေါင်း မယ်ဆိုရင်လဲ Identifier နဲ့ ပေးထားရင် ယခု ပြော တာတွေ သိထားရင် မှားဒေါင်းတာ တွေဘာတွေ မဖြစ်တော့ ဘူးပေါ့ ။ သိတဲ့ သူတွေ က တော့ ကျော်ဖတ် သွား လိုက်ပါ ...
Model Variant Identifier
A1203 GSM iPhone1,1
A1241 GSM iPhone1,2
A1303 GSM iPhone2,1
A1332 GSM iPhone3,1
A1387 GSM+CDMA iPhone4,1
A1428 GSM iPhone5,1
Apple iOS Software Phone Application
မြန်မာဖောင့် နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် iOS 7+ အတွက် အကောင်းဆုံး Cydia Sources များ
Maung Pauk at 7:38:00 PM 2
iOS 7+ နှင့် လိုက်ဖက်ညီစေမယ့် "Cydia" version 1.1.9 ကို အခုဆိုရင် Update လုပ်နိုင်ကြပါပြီ...
iOS7Themes နဲ့အတူ အမြင်သစ်နှင့် Cydia ကို မြင်တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်၊ Cydia ကို Upgrade လုပ်ရန်အတွက် Cydia icon ကို နှိပ်ပါ၊ pop up message ပေါ်လာပါက "Upgrade Essential" (သို့) "Upgrade Complete" တစ်ခုခုကို ရွေးပေးလိုက်ပါက အလိုလျှောက် Update လုပ်သွားပါလိမ့်မည်..
Cydia အသစ်နှင့်အတူ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် iOS 7+ အတွက် အကောင်းဆုံး Sources အသစ်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
၁) Sources များကို သွင်းယူရန် "Cydia" ကို ဖွင့်ပါ။
၂) Manage -> Sources -> Edit -> Add (http:// နှင့် စသောကို သွင်းယူပါ)
**2014 Top Cydia Sources**
Mobilefarm: http://cydia.myrepospace.com/mobilefarm/ **မြန်မာစာသွင်းရန်**
Repo Cydia: http://RepoCydia.com
HackStor repo: http://cydia.myrepospace.com/Hackstore/
myrepospace (iAP Cracker): http://cydia.myrepospace.com/urus
THIS LINK IS FORBIDDEN: http://THIS LINK IS FORBIDDEN.com
Ste: (ScuummVM): http://urbanfanatics.com/cydia/
Source: "http://cydia.myrepospace.com/mobilefarm/" ကိုသွင်းယူပါ။
ထိုနောက် ပုံတွင် ပြထားသော "Zawgyi Font iOS" ကို Install လုပ်ပါ။
iOS 7+ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မယ့် AppSync 7+
Source: " http://cydia.appaddict.org " and Appsync for iOS 7.0 + install.
**Working Tweaks with iOS 7+**
Ascend G700 固件（G700-U00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC00B136,联通渠道) Official Firmware
Ye Naing at 7:37:00 PM 3
Huawei G700-U00 - Build Number - B136 နှင့်အဆုံးသတ်တဲ့ Official Firmware ပါခင်ဗျာ။
IDM နှင့် Resume ရပါတယ်....
华为C8813D固件（C8813D,Android 4.1,Emotion UI,V100R001C92B175,中国电信) Official Firmware
Ye Naing at 7:32:00 PM 2
Huawei C8813D - Build Number B175 နှင့် အဆုံးသတ်တဲ့ Offical Firmware ပါခင်ဗျာ။
IDM နှင့် Resume ရပါတယ်။
Y511 固件(Y511-U00,Android 4.2,V100R001C00B165,中国联通) Official Firmware
Ye Naing at 7:29:00 PM 0
Huawei Y511-U00 ဖုန်း Build number B165 နှင့်အဆုံးသတ်သော Official Firmware ပါခင်ဗျာ။
Maung Pauk at 8:34:00 PM 1
Huawei Acsend G730-T00 ရဲ့ Build Number B121 နဲ့ ဆုံးတဲ့ Official Firmware ကို ဒီဇင်ဘာ 19 ရက်နေ့က Update ဖြစ်ပါတယ်.. အပြည့်အစုံက Huawei G730-T00 firmware (G730-T00, Android 4.2, Emotion UI, V100R001CHNC01B121, China Mobile) ဖြစ်ပါတယ်..
Huawei Acsend G730-U00 B125 Official Firmware Download
Maung Pauk at 8:19:00 PM 1
Huawei Acsend G730-U00 ရဲ့ Build Number B125 နဲ့ ဆုံးတဲ့ Official Firmware ကို ဒီဇင်ဘာ 19 ရက်နေ့က Update ပေးလိုက်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေများ ကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Optimize file management stability
Serif DrawPlus X6 v13.0.2.24
Maung Pauk at 7:58:00 PM 0
ဒါကတော့ ပုံတွေ ပြင်ဆင် ဖန်တီးရေးဆွဲရာမှာ AdobeIllustrator CS6, CorelDRAW X6, Graphics Suite, Xara Photo & Graphic Designer9စတာတွေထက်သာလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်လို့ဆိုထားတဲ့
Photo Editing Tool ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောတာနဲ့ အညီ ဆန်းသစ် တဲ့ ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်ကလည်း စိတ်ဝင်
စားစရာဖြစ်သလို စုံလင်ပြည့်စုံတဲ့ Tools တွေကလည်း တကယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတာတွေ့ရ
ပါတယ်။ Professionl Designer တွေအတွက် စမ်းသပ်အသုံးပြုသင့်သလို မိမိတို့ နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရင် ဆောင်
Asacomplete design package, DrawPlus X6 makes it easy to include images in your drawings or plans and improve them with professional-quality effects. The comprehensive PhotoLab, Cutout and AutoTrace studios allow you to enhance images, perform accurate photo cut-outs and instantly turn photos into vector artwork.Apply non-destructive adjustments to sharpen up your images plus remove red eye and blemishes – there’s no need to switch toaseparate photo editor! DrawPlus supports multiple files types such as JPEG, PNG and GIF as well as Adobe® Photoshop® files.
Want to get your artwork professionally printed? PDF import, editing and export means you can prepare your artwork and have it ready-to-go in minutes!DrawPlus X6 supports PDF/X1, 1a and, for the first time, PDF/X-3:afile type required by some professional printers.
Microsoft Windows® 8, 7, Vista (32 or 64-bit) or XP SP3 (32 bit) operating system
778MB free hard disk space
To enjoy the full benefits of brushes and their textures, your computer should useaprocessor that supports SSE. SSE2 is supported by almost all processors sold since 2003. On brush selection, an onscreen message will indicate if your computer is non-SSE.
Download Via Tusfiles : 638.4 MB
Serif DrawPlus X6 v13.0.2.24 part1
Serif DrawPlus X6 v13.0.2.24 part2
Serif DrawPlus X6 v13.0.2.24 part3
Download Via Davvas : 638.4 MB
Thanks to Blogger Koyan